बाह्र सय वर्ष पुरानो गुम्बा व्यवस्थापनको तितो व्यथा सुन्ने कसले ? « Philco Mission
बाह्र सय वर्ष पुरानो गुम्बा व्यवस्थापनको तितो व्यथा सुन्ने कसले ?
रिपोर्टरको डायरी एक
सोमबार २४,कार्तिक २०७७
हुम्ला लाग्छ । बाहिरबाट हेर्दा यो गुम्बा नेपालको आफैमा एक अनमोल र ऐतिहासिक सम्पदा हो तर होइन रहेछ राज्यले नाम मात्र दिएर काम नदिएको लामो व्यथा र कथा पनि रहेको छ । यो हो हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नं ६, हल्जी गाउँमा अवस्थित करीब १२ वर्ष पुरानो गुम्बा व्यवस्थापनको मार्मिक कथा
असोज महिनाको पारिलो घामको सुनालो किरणसँगै धपक्कै सुनौलो रङ पोतिएको घामको पारिलो वातावरणमा हामीहरू म कर्णबहादुर रोकाया र नरजंग तामाङ्ग लिमी गाउँको खाद्यान्न समस्याको विशेष रिपोर्टिङ्गका लागि वडा अध्यक्ष पाल्जोर तामाङ्गको सिफारिशमा लिमीमा गएका हौं ।
असोज २७ गते बुधबार बिहान ८स्३० बजे हामी नेपालको अति प्राचिनकालमा बनेको १२ सय वर्ष पुरानो गुम्बाको आँगनमा त्यहाँका टावाहरूसँग गुम्बा दर्शनका लागि अनुरोध गर्दै थियौं । त्यसैबेला एक जना जर्मन पर्यटन एजेन्सीमा काम गर्ने हल्जी गाउँका युवासँग जम्काभेट भयो । अन्दाजी २५ वर्षका छेवाङ्ग ङुटुप तामाङ्गले हामीहरू लिमीको हल्जीमा आउनेको कारण सोधे, हामीहरू पत्रकार हुँ र यहाँको खाद्यान्न समस्याको बारेमा जानकारी लिन आएको बतायौं । उनी आफ्नो खेतमा जाँदै थिए ।
उनै छेवाङ्ग ङुटुपका अनुसार तिब्बतका महान् अनुवादक रिन्छेन जाङ पोले स्थापना गरेको १०८ गुम्बामध्ये यो हल्जी गाउँको गुम्बा अन्तिम भएको र उनले पनि यही लिमीको पबित्र भूमिमा नै समाधी लिएको जानकारी दिए । उनैले प्रचलनमा ल्याएको रेखठेक र राठा अर्थात् चालचलन र संस्कार आजसम्म पनि सुचारु रहेको थाहा पाइयो । यो गुम्बा इतिहास, पुरातत्व, धर्म, संस्कृति, परम्परा र अन्य कुराहरूमा पुथक र महत्व रहे पनि सरकारले आजसम्म हेर्न नसकेको यहाँका मुख्य टावा अर्थात् बुक्वा सोनाम तुन्डुप तामाङ्गको आक्रोस रहेको छ । उनले भने यहाँ कति आए कति आए । गुम्बा हेर्न आउँछन् । यो दिन्छु ऊ दिन्छु भनेर ट्वाक अर्थात् गफ हाँकेर जान्छन् । गएपछि बिर्सन्छन् । तिमीहरू पनि त्यस्तै त हौला नि रु किन आएको यस्तो महामारीको समयमा रु के ल्याएर आयौं रु किन आयौं रु भन्ने जस्ता धेरै आक्रोसपूर्ण आवेशका भावहरू हामी माँझ पोखे । मैँले पनि स्पष्ट शब्दमा भने कि हामी तपाईहरूलाई केही दिन आएका हैनौं । भर्खर सरकारले लिमीको तीन गाउँ तील, हल्जी र जाङका लागि दिएको चामल र यहाँको समस्याका बारेमा जान्न आएका हौं । तपाईले हामीलाई गुम्बा दर्शन गराउने नगराउने तपाईको इच्छा भनेपछि उनले गुम्बाको तल्लो तलामा रहेको विभिन्न प्रकारका मुर्तिहरूका साथमा रहेको गुम्बा स्थापना गर्ने रिन्छेन जाङ पोको बारेमा पनि जानकारी दिएर रु यसका साथै गुम्बाका लागि चाहिने अत्यावश्यक कुराहरूको फेरहस्ती बताए ।
भनिन्छ राज्यको सेवा सुविधा पनि नेपालका दूरदराजमा पुजेका छैनन् पुगेको बजेट र विकास पनि राजनीतिका अगुवा र हगुवाहरूले खाइ दिँदा स्थानीयहरूको आक्रोस बढ्नु पनि स्वाभाविक देखिन्छ । यो १२ सय वर्ष पुरानो हो भनेर हामीले जति गर्व गर्छौ, त्यस्तै यो गुम्बालाई अहिलेसम्म यस्तो धरोहर बनाउनमा यहाँका टावाहरू र स्थानीयहरूको रगत, पसिना र श्रमको थोपा थोपाको योगदान रहेको छ । चाहे मानसिक कष्ट किन नहोस् रु चाहे शारीरिक र आर्थिक व्यथाले नै किन नपिरोलोस् ?
न त श्रम गर्ने ठाउँ र वातावरण छ । न छ आम्दानीको स्रोत र समय पनि । अब त हिउँद पनि आयो पूजाआजाको दिन पनि बढ्दै गए । यो असीमित कामलाई के कसरी सीमित व्यवस्थापन गर्ने हो उनलाई ठूलो चिन्ता छ ।
हो यो वर्ष गुम्बाको दैनिक पूजाआजा र अन्य नियमित पूजाका लागि धेरै गाह्रो हुने हल्जीगाउँका स्थानीयहरूले बताएका छन् । यो वर्ष हल्जी गाउँमा रहेको बाह्र सय वर्ष पुरानो गुम्बाको दैनिक क्रियाकर्म चलाउन गाह्रो देखिएको छ । यसका लागि सरकारले पनि नियमित कुनै कोषको व्यवस्था गरेर यो ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदालाई जोगाउने काममा ध्यान दिने हो कि रु सबैलाई चेतना भया, ऊँ मणि पद्मे हुँ सा ।